Instant Smokey Eye Pencil 020 | CATRICE COSMETICS
Instant Smokey Eye Pencil 020
Smokey အရောင် ၃ရောင်ရရှိနိုင်ပါသည်
For an instant effect. With the Eyepencil in three smokey colours and its integrated sponge, you can draw and blend seductive Smokey Eyes foragreat eye make-up look.
Practical and easy to use. Simply apply the Instant Smokey Shadow and Liner on the entire lid or only along the upper lash line and blend. This createsagreat Smokey look. Eye shadow pencils are particularly suitable for women with contact lenses, as no powder can get into the eye.
ချက်ချင်းသိသာစေတဲ့ effectအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Smokey အရောင်၃ရောင်ရရှိနိုင်တဲ့ eyepencilလေးဖြစ်ပြီး Spongeတစ်ခုစီ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆွဲနိုင်တယ် .. blendလုပ်နိုင်တယ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Smomeky eye makeup lookအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေ့ကျကျ လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မျက်ခွံတစ်ခုလုံးပေါ်မှာ လိုင်နာကို အသုံးပြုတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် .. အပေါ်မျက်တောင်လိုင်းမှာပဲဆွဲပြီး blendလုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် လွယ်လွယ်လေး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါက အရမ်းလှတဲ့ Smokey lookကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ Eyeshadow Pencilတွေဟာ မျက်လုံးထဲကို ပေါင်ဒါမှုန့်တွေ မဝင်နိုင်တာကြောင့် မျက်ကပ်မှန်တပ်တတ်တဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေပါတယ်။